Go Green: စီဒီများနှင့်ဒီဗွီဒီများကိုအသုံးပြုခြင်းအားရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်း ၅ | Martech Zone
Go Green: စီဒီများနှင့်ဒီဗွီဒီများကိုအသုံးပြုခြင်းမှရပ်တန့်ရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 25, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
EPA ၏အဆိုအရ ၅.၅ သန်းစီဒီများ၊ သူတို့၏ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အခြားသန်းချီသောဂီတစီဒီများကိုနှစ်စဉ်ပြန်လည်အသုံးချခြင်းမရှိဘဲပစ်လွှတ်ကြသည်။ စီဒီများနှင့်ဒီဗွီဒီများကိုအလူမီနီယမ်၊ ရွှေ၊ ဆိုးဆေးများနှင့်အခြားပစ္စည်းများမှပြုလုပ်သည် - သို့သော်များသောအားဖြင့်ပိုလီကာဗွန်နိတ်နှင့်ယွန်းများ။ Polycarbonate နှင့် Lacquer ကိုရေနံစိမ်းမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သည်။
လစဉ်ပုံမှန်စီဒီနှင့်ဒီဒီဗီဒီပေါင် ၁၀၀,၀၀၀ သည်ခေတ်နောက်ကျသွားသည်။ ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်ထိရောက်သောနည်းလမ်းမရှိပါ။ အရ ရေနံစက်မှု သူ့ဟာသူဆီအုန်း ၁.၁ ဂါလံ (၄၂ ဂါလံ) သည်ရေနံဓာတုပစ္စည်းများသို့ရောက်ရှိသည်။
ငါနှင့်အတူ cloud computing သို့ switching, ထို့နောက်ပြောနေစရာမလိုဘဲသွားထင်ပါတယ် virtualized ဆာဗာများ ၀ န်ဆောင်မှု application တစ်ခုအနေဖြင့် Software ကိုရယူခြင်းသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ရေနံတစ်စည်၏မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော discs မ်ားဖန်တီးခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ၊ သို့သော် discs များကိုမီးရှို့မည့်အစားဖိုင်မျှဝေရန်အတွက် USB drives နှင့်ကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုထိရောက်နိုင်သည်။
ဖြည့်စွက်ကာ သုံးပြီး အဆိုပါ discs တွေကို, ငါကကူညီပေမယ့်အဲဒီ discs တွေကိုထုတ်လုပ်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်မလိုအပ်သောအသုံးပြုခြင်းခံရကြောင်းစွမ်းအင်အများကြီးရှိပါတယ်စဉ်းစားပါ။ သေချာတာပေါ့ပလတ်စတစ်အတွက် bandwidth ကိုလဲလှယ်ခြင်းဖြင့်လူသားများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လား။ ငါရှိတယ်နားလည်သဘောပေါက် အခြားအရာများစွာကို ဒီဟာကပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္playကနေပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီမလိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှဘာကြောင့်မပြောတာလဲ။
ဘာကြောင့်သုံးတာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိသည် တစ်န်ဆောင်မှုအဖြစ် Software များ ၏သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ပါဘူး အစိမ်းရောင် Going စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကြံပေး? Terabyte hard drives, USB drives, online backups …ဒီအရာအားလုံးကိုလူတိုင်းသုံးရန်အလွယ်တကူရယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှစီဒီနှင့်ဒီဗွီဒီတွေကိုဘယ်တော့မှမဝယ်သင့်ဘူး။ ရုပ်ရှင်တွေကိုဒီဗီဒီနဲ့တောင်မငှားတော့ဘူး၊ သူတို့ကိုငါငှားလိုက်တယ် AppleTV!
သင်၏ CD စွဲလမ်းမှုကိုတားဆီးရန်နည်းလမ်း ၅ ခု
၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆော့ဝဲလ်သို့ပြောင်းပါ။ ဥပမာများ - Google Apps အတွက် Microsoft Office ကိုစွန့်ပစ်ပြီး Salesforce အတွက် Microsoft CRM ။ အရန်တပ်ဆင်ခြင်းများ၊ အရန်ကူးခြင်းများ၊ စက်ပစ္စည်းများမရှိပါ။
DVD များငှားရမ်းခြင်းနှင့်တေးဂီတစီဒီများကို ၀ ယ်ခြင်းမှသင်၏တေးဂီတဝယ်ယူမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ငှားရမ်းခြင်းများကိုကူးယူခြင်းသို့ပြောင်းပါ iTunes က, AppleTV နှင့်အခြားပရီမီယံန်ဆောင်မှုများ။ iTunes သည်သူတို့၏လိုဂိုကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။
အရန်ကူးခြင်းနှင့်စီဒီများနှင့်ဒီဗွီဒီများမှအချက်အလက်များကို USB Drives သို့ကူးယူခြင်းမှကူးပါ။ USB drives သည် data များပိုမိုသိမ်းဆည်းနိုင်ပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်၊ (သတိထားရမှာက USB drive အားလုံးဟာတန်းတူမဟုတ်ပဲ!) သင့်အလုပ်ကိုအရန်ကူးရန်နှင့်၎င်းကိုအလုပ်ခွင်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခရီးဆောင် drive တစ်ခုကိုဝယ်ယူပါ။ ငါမရှိဘဲဘယ်နေရာမှာမသွားဘူး အနောက်တိုင်းဒီဂျစ်တယ်ပတ်စ်ပို့ဒါငါလုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါ။
ကြီးမားသောဖိုင်များကိုအခြားကုမ္ပဏီများသို့ online SaaS ရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းပါ DropSend, သင်ပို့ပေးပါ, ဤဖိုင်ကိုပို့ပါ, မေးလ်နှင့် SendSpace.
သင်၏ CD နှင့် DVD drives များကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ သင်သည်သင်၏နောက်လက်ပ်တော့တစ်လုံးကိုမှာယူသောအခါဝယ်ယူသူနှင့်မပါပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ရုံးခန်းတွင်သင်မှာယူသောအခါသင်၏ငွေစာရင်းအချို့ကိုသိမ်းဆည်းပြီး DVD စာရေးသူအားအဆင့်မြှင့်မည့်အစား USB drives များကို ၀ ယ်ပါ။ ၎င်းတို့ကိုမရရှိနိုင်ပါက၊ နောက်စီဒီတစ်ချပ်ကိုသင်မီးရှို့ဖျက်ဆီးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့၊ ငါစီဒီတွေကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုတာလဲ CD ပေါ်ရှိစာအုပ်များအတွက်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကားမောင်းရန်နှင့်အလုပ်မှဂီတကိုကူးရန်ဖြစ်သည်။ ငါကတော့စျေးနှုန်းတွေကိုကြည့်နေတယ်။ ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ထက်နည်းတဲ့ USB input နဲ့ iPod ထိန်းချုပ်မှုတွေပါတဲ့အစားထိုးကားစတီရီယိုတစ်ခုရနိုင်တယ်။ ငါပြောင်းရွှေ့ဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။
Ning: ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့်ပုံစံချခြင်း API ကို မေးမြန်းချက်
Google Adsense ယခုကျွန်ုပ်၏ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မှု
28:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 07
ခင်ဗျား၊ ခင်ဗျားရဲ့စာမဖတ်ခင်အထိငါတို့အားလုံး CD နဲ့ DVD တွေကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ငါဂုဏ်ယူစွာပြောနိုင်ပေမယ့်မင်းရဲ့စာရင်းထဲမှာနံပါတ် ၁၊ ၃ နဲ့ ၄ ကိုငါလုပ်ပြီးပြီ။